App (သို့မဟုတ်) GPS အလုပ်မလုပ်ခြင်း – Driver
Application အခက်အခဲများ အတွက် ဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်းများ
App (သို့မဟုတ်) GPS အလုပ်မလုပ်ခြင်း
Grab app နောက်ဆုံး version ကို update လုပ်ခြင်းဖြင့် App အသုံးပြုရာတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေပါသည်။
GPS အလုပ် မလုပ်ခြင်း
Booking ဝင်လာသော်လည်း အလုပ်လက်ခံ၍ မရခြင်း
App ဖွင့်လို့မရခြင်း / တုံ့ပြန်မှု မရှိခြင်း ၊ Grab အကောင့်ထဲမှ ခဏ ခဏပြန်၍ ထွက်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) error ပြနေခြင်း
သင့်ဖုန်းတွင် GPS အလုပ်မလုပ်ခဲ့လျှင် အောက်ပါ အဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1. Google Maps မှာရှိတဲ့ သင်ရဲ့ location ကို စစ်ဆေးပေးပါ။
သင်၏ လက်ရှိတည်နေရာနှင့် Google Mapsတွင်ရှိသော တည်နေရာအား ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးပေးပါ။ အကယ်၍ တည်နေရာကိုက်ညီမှု မရှိဘူး ဆိုလျှင် သင်၏ ဖုန်းတွင်တက်ထားသော cover ကိုဖြုတ်ပြီး ကားရှေ့မှန်အနီးတွင် ထားပေး၍သော်လည်းကောင်း battery saver settings ကို disable လုပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ location setting mode ကို high accuracy သို့ပြောင်း၍သော်လည်းကောင်း Maps ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
2. သင်ရဲ့ မြေပုံ app ကို update လုပ်ပေးပါ
Setting ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Software update ကိုရှာပြီး Manual update လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ဖုန်း၏ Android OS ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင်လည်း update လုပ်ရပါမည်။ Google Play ကို တစ်ချက်ဖွင့်၍လည်း App ကို update လုပ်နိုင်ပါသည်။Map app မှာ update ရလျှင်လည်း update လုပ်နိုင်ပါသည်။
3. ၅ မိနစ်ကြာ flight mode ကို on ထားပေးခြင်း
ဖုန်း Setting ထဲရှိ More ထဲတွင် Airplane mode ကို on လုပ်ပေးပါ။
Home screen ၏အောက်ခြေကို ပွတ်ဆွဲတင်လိုက်ပြီး Airplane logo ကို on လုပ်နိုင်ပါသည်။
4. Flight mode ကို Disable လုပ်၍ ပြန်လည်စမ်းသပ်ခြင်း
အကယ်၍ အထက်ပါအကြံပြုချက်များကို လုပ်ဆောင်ကြည့်သော်လည်း GPS အခက်အခဲများရှိနေသေးလျှင် သင်၏ဖုန်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အကယ်၍သင့်မှာ booking ဝင်လာပါသော်လည်း အလုပ်လက်ခံ၍မရပါက အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1. တခြားမလိုအပ်သော anti-virus,firewall,(သို့မဟုတ်)adblocker software များကို uninstall လုပ်ပေးပါ
တခြားမလိုအပ်သော third party software များဖြစ်သော anti-virus,firewall,(သို့မဟုတ်)adblocker software များသည် သင်ရဲ့ အလုပ်လက်ခံမှုများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် ထိုsoftware များမရှိအောင် တစ်ချက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။
2. သင့်ဖုန်းရှိ Cache ကိုရှင်းပေးပါ။
ဖုန်း Setting ကို ဖွင့်ပြီး App info ထဲရှိ Grab ကိုရှာပြီး တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။Scroll Bar လေးကို အောက်သို့ဆွဲချပြီး CLEAR CACHE ခလုတ် လေးကို နှိပ်ပေးပါ။
သင်၏ app တွင် App ဖွင့်လို့မရခြင်း/တုံ့ပြန်မှု မရှိခြင်း ၊ Grab အကောင့်ထဲမှ ခဏ ခဏပြန်၍ ထွက်သွားခြင်း (သို့မဟုတ်) error ပြနေခြင်းများရှိနေလျှင် အောက်ပါ အချက်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
1. Connectivity ကို စစ်ဆေးပေးပါ
Internet Browser ကိုဖွင့်ပြီး www.google.com ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Go ကို နှိပ်ပေးပါ။Page မှာ loading fail ဖြစ်နေသည်ဆိုပါက Internet connectivity နှင့်ပတ်သတ်ပြီး အခက်အခဲရှိနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် Grab အကောင့်ကို ပြန်လည် မစစ်ဆေးခင် connectivity ပြန်လည်ရရှိရန် သင်၏ device တွင် manual (သို့မဟုတ်) internet service provider များကို တစ်ချက်စစ်ဆေးပေးပါ။
2. Updates ဖြစ် မဖြစ် စစ်ပေးပါ။
Setting ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Software update ကိုရှာပြီး Manual update လုပ်နိုင်ပါသည်။ သင့် Android OS ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင်လည်း update လုပ်ရပါမည်။။Google Play ကို တစ်ချက်ဖွင့်၍လည်း app ကို update လုပ်နိုင်ပါသည်။Grab app မှာ update ရလျှင်လည်း update လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဖုန်း Setting ထဲမှ General ကိုရှာပြီး Software Update ကို နှိပ်ပါ။ IOS ကို update လုပ်ဖို့လိုအပ်လျှင်လည်း update လုပ်နိုင်ပါသည်။App Store ကို ဖွင့်၍လည်း update လုပ်နိုင်ပါသည်။Grab app မှာ update ရလျှင်လည်း update လုပ်နိုင်ပါသည်။
3. App ကို Restart လုပ်ပေးပါ။
Recent apps button ကိုရွေးချယ်နှိပ်၍ Grab ကိုရှာပြီး App ကိုပိတ်မဲ့ဘက်သို့ ဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Grab app ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးကြည့်ပါ။
Home Button ကို နှစ်ခါ နှိပ်၍ Grab ကိုရှာပြီး အပေါ်သို့ ဆွဲတင်ကာ app ကို ပိတ်နိုင်ပါသည်။ပြီးလျှင် Grab app ကို ပြန်ဖွင့်ပြီး သုံးကြည့်ပါ။
4. ဖုန်းကို Restart လုပ်ပေးပါ။
Restart ခလုတ်ကို မတွေ့ပါက ဖုန်းကို Power ပိတ်ပြီးနောက် ပြန်ဖွင့်ပေးပါ။
5. Cache ကိုရှင်းပေးပါ။
ဖုန်း Setting ကိုနှိပ်ပေးပါ။App ထဲရှိ Grab ကိုရှာပြီး နှိပ်ပေးပါ။ Scroll bar လေးကို အောက်သို့ဆွဲချပေးပါ။STORAGE ကို ရွေးပြီး CLEAR CACHE ကို နှိပ်ပေးပါ။
6. App ကို ပြန်သွင်းခြင်း
Google Play Store ထဲတွင် Grab ကိုရှာ၍ app ကိုနှိပ်ပြီး Uninstall လုပ်ပါ၊ uninstall လုပ်ခြင်းပြီးသည်အထိ စောင့်ဆိုင်း၍ Install ကိုပြန်နှိပ်ပြီး installing ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ၊ ထို့နောက် open ကို နှိပ်ပေးပါ။
Grab icon ၏ ဘယ်ဘက်ထောင့် ထိပ်ဆုံးရှိ X (အမှား)လေး မပေါ်မခြင်း icon ကို ဖိနှိပ်ပေးပါ။App store ကို မသွားခင် app ကို delete လုပ်ပါ။ထို့နောက် Grab ကို ရှာပြီး install လုပ်ပေးပါ။installing ပြီးပါက open ကို နှိပ်ပါ။
အထက်ပါအချက်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပြီးသည့်နောက် သင်၏ app (သို့မဟုတ်) GPS သည် အလုပ်မလုပ်သေးပါက ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးအကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။